हाम्रा बाबा बूढो भएपछि के मा खान दिने? | Shresthakedar's Blog
हाम्रा बाबा बूढो भएपछि के मा खान दिने?
एउटा गाउँमा ७० वर्ष काटिसकेका दयासिंह नामका बूढा थिए। केही वर्ष अघि उनका स्त्री मरिछन्। त्यसपछि उनका छोरा निष्ठुरसिंह र बुहारी कटुगराले उनका हातबाट घरको श्रीसम्पत्तिको साँचो कब्जामा लिए। त्यसपछि बूढालाई उनीहरूले चीसो छिंडीको एउटा कुनामा राखेछन् र खानलाई दिनको ४ मुठी पीठो खटाएछन्।
छोरा जन्मँदा हर्षको आँसु खसालेको उनको आँखाबाट त्यही छोराको निष्ठुरपनले अहिले दु:ख र पीडाका आँसु बगिरहेको थियो।
एकदिन दयासिंह रीस र शोकले आफ्ना सामुन्नेका भाँडाहरु एकातिर मिल्काई थोत्रो टिनमा दु:खका बाजा बजाउँदै थियो। त्यसदिन निष्ठुरसिंह र कटुगरा दुबै घरबाट बाहिर गएका रहेछन्। घरमा निष्ठुरसिंहको छोरो ९ वर्षे बालक चलाकसिंह मात्र थियो।
बूढाले बजाएको पीडाको बाजा चलाकसिंहले सुने र अनि दयासिंहलाई बाजा बजाउनुको कारण सोधे। बुढाले भने- “हेर बाबू, म यो बाजा किन त्यसै बजाउँथें र? यो दयासिंह सुनको थालमा भात खान्थ्यो, आज उसलाई प्वाल परेको टिनको थालमा कोदोको खोले? यही दु:खले यो बाजा बजाउँदै छु। बाबू चलाकसिंह तिमी तिम्रा बाबु झैं नबन्नू।”
« लोभको साँध (नेपाली लोक दन्त्य कथा)
जिउँदो मान्छेको करामत र यमराज »